onlineakhabar.com: OMG !! छोराले लभ म्यारिज गर्दा आमालाई यस्तो डरलाग्दो अमानविय व्यवहार....
Amazing Woman, Amazing World, India News, International, Love Marriage » OMG !! छोराले लभ म्यारिज गर्दा आमालाई यस्तो डरलाग्दो अमानविय व्यवहार....
OMG !! छोराले लभ म्यारिज गर्दा आमालाई यस्तो डरलाग्दो अमानविय व्यवहार....
छोरालाई लभ म्यारिज गरेका कारण उनको आमासँग अमानविय व्यवहार गरिएको छ । केटी पक्षबाट ५० बर्षीय यी महिलालाई पहिला निर्मम कुटपिट गरी उनको कपाल काटियो त्यसपछि मुखमा कालो मोसो दलियो त्यतिले मात्र नपुगेर उक्त महिलालाई नाङ्गो बनाएर संवेदनशिल अंगमा खुर्सानीको धुलो राखेर छोडियो ।
जब यो कुराको जानकारी महिलाका आफ्नो परिवारले थाहा पाए गाउँलेहरुको मद्दतबाट छुटाइयो । पुलिसले महिलालाई बेहोशी हालतमा अस्पतालमा भर्ना गराएका छन् । पुलिसले घटनामा संलग्न चार महिलाहरु सहित ६ जना विरुद्द मुद्दा दायर गरेको छ ।
पुलिसका अनुसार सबै अपराधीहरु फरार भएका छन् । यो घटना भारत उत्तर प्रदेश लखनउको एक गाउँमा सोमवार दिउँसो २ बजेको हो । त्यो समयमा उक्त महिला औषधी लिनका लागि खैरटिया रेलवे स्टेशन गएकी थिइन् त्यही केटी पक्षका व्यक्तिहरुले उनलाई समातेर आफ्नो घरमा लगि अमानविय व्यवहार गरेका हुन् ।
पुलिसका अनुसार ६ महिना पहिले उक्त महिलाको छोराले लभ म्यारीज गरेका थिए । त्यसपछि दुबैले गाउँ छोडेका थिए । महिलाका पति भन्छन्, केटी पक्ष यो कुराको बिपक्षमा थिए । यसै बिषयमा दुबै पक्षको पंचायत पनि भएको थियो । पंचायतको निर्णय अनुसार केटा पक्षले केटी पक्षलाई ७० हजार रुपैया दिएको थियो । त्यसपछि विवाहित जोडी आफ्नै गाउँमा आएर बस्न थालेका थिए । त्यसबेला यो घटना सेलाएको थियो ।
Tags : Amazing Woman Amazing World India News International Love Marriage